Ampidino TorrentRover ho an'ny Windows
Sehatra: Windows Fiteny: English
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (8.90 MB)
TorrentRover dia programa maimaim-poana izay mamonjy anao aminny olana aminny fikatsahana ireo rakitra torrent azo antoka ary mamela ny fisintomana avy aminireo tranonkala falehan-driaka malaza. Ny programa, izay mampiaraka atiny avy aminny loharanom-baovao malaza toy ny KickAssTorrents, ThePirateBay, IsoHunt, ExtraTorrent, dia iray aminireo tsara indrindra aminireo fandaharana falehan-driaka.
Araka ny fantatrao, ireo tranokala torrent ampiasaina hampidinana sarimihetsika sy andian-tantara aminny TV ary lalao dia tsy manome atiny azo antoka tanteraka. Na inona na inona safidinao, na malaza be toy inona aza izy io, dia mety hampidi-doza ny fisintomana rakitra, ary pop-up dia bonus rehefa misintona riaka. TorrentRover dia miseho aminizao fotoana izao. Io dia ahafahantsika miditra aminny atiny azo antoka tanteraka aminny alàlanny famongorana ireo bibikely eto an-tany.
Ny hany zavatra tsara momba ny TorrentRover dia tsy ny fanolorany atiny mifantina aminireo tranokala torrent malaza. Aminny safidy fikarohana sy sivana aminny antsipiriany, azonao atao ny mahatratra ny tena tadiavinao aminireo riandrano an-tapitrisany ary misintona azy ireo mivantana nefa tsy sendra fahagagana. Raha sarimihetsika ilay rakitra nakarinao, azonao atao ny mahazo vaovao momba ilay sarimihetsika aminny fipihana ny rohy IMDB na avy aminny pejy Wikipedia, ary azonao atao ny mijery ilay tranofiara ao aminny YouTube.
Lafiny iray hafa aminilay programa tiako ny mampaninona ny mpihaino ny andiany. Raha tokony hikaroka sy hisintona ianao raha alefa ny fizarana vaovao aminilay andian-tantara arahinao tsy tapaka, dia azonao atao ny manome baiko fampidinana mandeha ho azy ilay programa ary asaivo alaina mivantana rehefa navoaka ilay fizarana vaovao.
Haben'ny rakitra: 8.90 MB
Fanavaozana farany: 22-07-2021
Advanced IP Scanner dia rindrambaiko maimaim-poana sy mahomby izay manao scan IP aminny...
Mozilla Thunderbird, mpanjifa mailaka haingana, mahomby ary ilaina, dia vao mainka maniry fatratra...
Open Broadcaster Software, na OBS raha fintinina, dia rindrambaiko mandefa maimaim-poana izay...
Twitch dia azo faritana ho toy ny fampiharana birao Twitch ofisialy izay mikendry ny hampivondrona...
Ny safidy uTorrent dia mpanjifa torrent kely sy tsotra izay afaka miasa aminny sehatra rehetra....
SlimBrowser dia manana rafitra tena tsotra raha oharina aminireo mpizaha Internet hafa. Toy izany...
Ny ankamaroan'ny fampidinana
Ampidino Google Chrome
Ampidino Mozilla Firefox
Ampidino UC Browser
Ampidino Tor Browser
Ampidino Malware Hunter
Ampidino Kaspersky Free Antivirus
Ampidino ESET NOD32 Antivirus 2021
Ampidino Avast Free Antivirus 2021
Ampidino Hello Neighbor 2
Ampidino Secret Neighbor
Ampidino PES 2021 LITE
Ampidino Genshin Impact
Ampidino Happy Wheels
Ampidino Clean Master
Ampidino Advanced SystemCare
Ampidino IObit Driver Booster
Ampidino IObit Uninstaller
Ampidino WhatsApp Messenger
Ampidino Internet Download Manager
Ampidino AVG VPN
Ampidino DAEMON Tools Lite
Ampidino GTA 5
Copyright © 2021, softmedal.com. Zo rehetra voatokana. Softmedal dia manome anao fotoana ahafahana misintona rindrambaiko pc maimaimpoana, android APK ary lalao. Afaka mahita ny lalao android malaza indrindra amin'ity sehatra fampidinana maimaimpoana ity ianao!